ထုံးစံ LEGO တည်ဆောက်ပုံ Star Wars Mandalorian Speeder စက်ဘီးပုံစံ
ထုံးစံ LEGO တည်ဆောက်ပုံ Star Wars Mandalorian Speeder စက်ဘီး
04 / 09 / 2020 03 / 03 / 2021 ရော့ Paton 2615 Views စာ0မှတ်ချက် 74-Z ကိုစက်စက်ဘီး, 75292 Mandalorian Bounty Hunter ပို့ဆောင်ရေး, 75292 အဆိုပါသင်တုန်းမောက်, စိတ်ကြိုက် Lego, Lego, Lego တည်ဆောက်, Lego MOC, Lego Star Wars, Speeder စက်ဘီး, အဆိုပါ Mandalorian, YouTube ကို
ထုံးစံတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံကိုလေ့လာပါ Lego Star Wars သင်၏ ၇၅၂၉၂ Mandalorian Bounty Hunter Transport သို့ 74-Z Speeder စက်ဘီးကိုထည့်ပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးအန္တာရာတောသစ်တောပေါ်မှပေါ်ထွက်လာခြင်းမှသည်ကုန်းစစ်ပွဲများတွင်ကြိုတင်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုခြင်းများနှင့်ပထမအကြိမ် Mandalorian ရာသီ၏အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်း ၇၄-Z Speeder စက်ဘီးသည်အမြဲတမ်း ap အမြဲရှိသည်။artအတွင်း icular ဆွဲ Star Wars၎င်း၏ထူးခြားပြီးရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစားသေးငယ်မှုနှင့်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးများဖုံးလွှမ်းနိုင်သည့်မြန်နှုန်းတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောအတွင်းလူကြိုက်များသည် Star Wars စကြဝာနှင့်ကစားနိုင်သည့်အလားအလာ၊ Speeder Bike ကိုလည်းတရားဝင်ဘာသာပြန်ဆိုသည် Lego ပိုကြီးတဲ့အစုံအတွက်ဂြိုဟ်တုမော်တော်ယာဉ်များအဖြစ် standalone အစုံနှင့်ပါဝင်မှုများစွာကိုဖြတ်ပြီးတစ်ကြိမ်ထက်ပိုသောအပေါ်ပုံစံ။ နှင့်အညီ, ထိုကဲ့သို့သော၎င်း၏ p ဖြစ်ပါတယ်articular ဒီဇိုင်း, ၎င်း၏ဒီဇိုင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်စကေးအကြားမျှတမှု၏စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မြင်းစီးသူရဲကောင်းကိုထိုင်ရန်နှင့်ကားကိုယ်ထည်၏လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုများကိုပိုမိုဖမ်းယူနိုင်ရန်အရွယ်အစားကိုတိုးချဲ့ပါ၊ သို့သော်ကားတစ်ခုလုံး၏ကျစ်လစ်သောသဘောသဘာဝကိုဆုံးရှုံးပါ။ အရွယ်အစားကို minifigure scale အထိဆွဲချပြီးအသေးစိတ်အသေးစိတ်ကိုလွဲချော်ပါ။
၎င်းသည်ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပန်ကာဒီဇိုင်းပညာရှင်များစွာကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှု၏အခြေခံဖြစ်သည် Brick Fanatics'' ဤနေရာတွင်သီးသန့်နှိမ့်ချကြိုးပမ်းမှု။ အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်ပါ - ၎င်းသည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးတရားဝင်သို့မဟုတ်ပန်ကာဗားရှင်းနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်မည်နည်း။
ဒီတစ်ခုကသူ့ရဲ့ p ကိုထင်ဟပ်စေတယ်artမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၇၅၂၉၂ Mandalorian Bounty Hunter Transport (ယခင် ၇၅၂၉၂) ၏ထပ်မံတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သောမင်ဒါလင်ရီယန်တွင် icular အသွင်အပြင်ရှိသည်။ သင်တုန်းမောက်).
p ပြီးနောက်artစာရင်း ကျနော်တို့ p ဖြန့်ဝေartကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်များကိုအခမဲ့ .xml format ဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဤ .xml ဖိုင်များကို BrickLink သို့တင်ပါ, မော်ဒယ်ထပ်ဖွရန်လိုအပ်သောအပိုင်းအစများအားလုံးစာရင်းကိုအဖြစ်ကမ္ဘာတဝှမ်းအခြေစိုက်ရောင်းချသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဝယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိရာ။ ဤထုံးစံအရ Speeder စက်ဘီးကိုဝယ်ရန်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည်စာပို့ခမတိုင်မီနှင့် Scout Trooper ကိုမစီးမီပေါင် ၄ မှ ၆ အတွင်းတွင်ရှိသည်။
ငါတို့ p အားလုံးကိုအခမဲ့ရယူခွင့်မှလွဲ။artတစ်ချိန်ကဖန်တီးခဲ့သောစာရင်းများ စာရင်းသွင်းရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည် Brick Fanatics သတင်းလွှာ။ စာရင်းသွင်းရန်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ''Brick Fanatics သတင်းလွှာ ဘေးဘားတွင်တည်ရှိပြီးနှင့်နှစ်သက်သောဒေသတစ်ခုရွေးချယ်ပါ (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ sign-ups ဖွင့်ထားသော်လည်း)
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည် Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← နေ့၏အုတ်ပုံ: LEGO ကိုပြောင်းလဲခြင်း
စစ်မှန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို LEGO တွင်တည်ဆောက်သည် Ideas ၂၁၃၂၃ Grand Piano →